Ny hakitroky ny hazo dia ampahefatry ny beton mihamafy ihany, Ny lanja manana lanja maivana, ny afovoan'ny hery misintona, ny malefaka tsara, ny rafitra miorina sy ny lalan-kely, ny herin'ny seismika kely dia voasarika mandritra ny horohoron-tany, fampisehoana seismika tsara.
Cedar boards antisepsis voajanahary ary miaraka amin'ny mari-pahaizana avo lenta, io no tsara indrindra amin'ireo ala hazo handefasana loko, tasy, menaka ary firakotra hafa.
Hazo cedar, kanto, loko mamiratra kokoa, hazo madio, fatotra hazo voajanahary, tsy rototra ny rano, tsy mainty, insulation de corosion, bobongolo, fofona, tsy miaraka amin'ny static, anti-bakteria, tsy mora simba, mora fikojakojana.
Fitaovana Cedar Interior
Ny tontonana Cedar dia vita amin'ny zana-kazo 100%, ny preservatives voajanahary dia hita ao amin'ny vatan'ny Cedar heartwood deodara.
Arc Cedar boards / Arc Cedar boards / Arc Cedar Siding
Cedar no hazo fanoherana voajanahary voajanahary avo indrindra any Amerika Avaratra. Ny fahaizany manohitra harafesina tsara dia avy amin'ny fitomboana voajanahary karazana alikaola antsoina hoe thujaplicins